Shiinaha LABER® U Soosaarka Warshadaha Glass Profile Glass iyo soosaarayaasha | Yongyu
Galaas U profile galaas U channel galaas- Isku darka dawooyinka suuxinta iyo tamarta
Xulashada muraayadda loogu talagalay wajiga dhismaha ama qaybta qolka xafiisku waa in aan qaddarin loo qaadan. Waa inaad had iyo jeer sahmiso xulashooyinkaaga si aad ugu dambeyso midka sawirka-kaamil ah. Haddii tani tahay waxa aad hadda sameyneyso, muraayadda 'U profile glass' waxaa mudan in laga fiirsado.
Kaliya kaliya uma muuqato mid soo jiidasho leh, laakiin noocan oo kale ah muraayadaha U profile galaas / galaaska U channel waxay sidoo kale ku faantaa guryo fara badan oo ka dhigaya mid ku habboon codsiyada dibedda iyo gudaha ah.
• koror xoog leh marka loo eego galaaska caadiga ah
• baahin iftiin weyn
• Xaraashka acoustic fiican
• Ilaalinta kuleylka
• Ilaalinta dhawaqa
Markay noqoto suuxinta, U profile dhalada / galaaska U channel waxay ku dari kartaa saameyn qabow la yaab leh qaabkaaga gudaha. Waa la googooyn karaa ama sandblasted lagu gaari karaa si loo gaaro heerka loo baahan yahay opaqueness iyo muuqaal jilicsan
U doorbid naqshadaha caanka ah ee muraayadaha U profile galaas / galaaska U channel muraayadaha galaaska / darbiyada daahyada, qaybo gudaha ah, ama wax kale
Haddii aad rabto waxoogaa qoraal gaar ah ama saameyn qabow, Yongyu Glass ayaa ku caawin kara. Waxaan diyaar u nahay inaan fulinno awaamiirno caado u ah alaabadayada si aan u dhameystirno qolalkaaga qolka ama darbiyada dhalada oo aad ku buuxineysid dhalada U profile galaas / galaaska U channel. Ka sokow inaad ahaato mid dabiici ah, waxay yihiin ikhtiyaarkaaga ugu waxtarka badan (xitaa haddii aad raadineyso naqshado ku-habboon).
Go'aan ka gaadh muraayadda kuu soo baxay adiga oo u oggolaanaya Yongyu Glass inuu kuu soo qaado!
Hore: Tareenka Nabdoonaanta Glass & Deedadka
Xiga: Muraayada casriga ah (Muraayada korantada iftiinka)
Glass Profile Galaal Yar Yar
U cabbir Muraayadda Muraayadda